Sharci cusub oo caruurta ka mamnuucaya aaladaha bulshadda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sharci cusub oo caruurta ka mamnuucaya aaladaha bulshadda
La daabacay fredag 29 januari 2016 kl 11.28
Iswiidhan ayaa sannadka 2018 soo dejinaysa sharci cusub oo caruurta da´doodu ka yartahay 16 ka mamnuucaya aalada ay bulshaddu ku kulanto tusaalahan facebook, snapchat iyo instagram.
Per Bohlund oo ah afhayeenka siyaasada dhaqaalaha ayaa wareeysi oo u la qaatay telefishinka la iska daawado ee SVT ka sheegay in u qeeynuunkan cusubi ka mid yahay sharciga EU ee ku saabsan maclumaadka la iskaga gubiyo internetka.
-Sharciga EU ayaa u jeeda in caruurta ka yar 16 jir laga mamnuuco aaladaha bulshadda ee internetka, waxaa dhici karta in xadkan la sii fogeeyo oo laga dhigo caruurta aan gaadhin da´da 13 jir, ayuu sheegay Bohlund.
Maanta ayey mamnuuc ka tahay in ay caruurta ka yar da´da 13 jir koonto ka furtaan facebook, instagram amba snapchat. Hasayeeshe kan ayaa ah heshiis ka dhaxeeya bogagan iyo shakhsiyadda isticmaala. Ka ay dawladdu soo dejin doonto ayaa noqon doona mid shakhsi kasta oo ka yar 16 jir sharcigan ku khasbaya, halkey waddamada qaar sharcigan ku bilaabi doonaan caruurta 13 jir ka yar.
Dawladda ayaa baadhitaan ku kooban qeeynuunka cusub ee EU dhowaan bilaabi doonta. Halkaas ayaa laga go´aaminaya da´da u sharcigani ka bilaabmi doono. Tan ayaa noqon karta 16 jir amba in caruuraha ka yar 13 laga mamnuuco aaladaha bulshadda. Caruurta u qeeynuunkani u diido in ay galaan boggagan ayaa ku khasban in ay ruqsad ka haystaan waalidkooda, ayey Computer Sweden bogeeda ku soo qoreen.
Maanta ayey mamnuuc ka tahay in ay caruurta ka yar da´da 13 jir koonto ka furtaan facebook, instagram amba snapchat. Hasayeeshe kan ayaa ah heshiis ka dhaxeeya bogagan iyo shakhsiyadda isticmaala. Ka ay dawladdu soo dejin doonto ayaa noqon doona mid shakhsi kasta oo ka yar 16 khasab kaga dhigaya , halka ay waddamada qaar sharcigan ka bilaabi doonaan caruurta 13 jirka ka yar.